Mgbụsị akwụkwọ bụ oge maka owuwe ihe ubi-News Center-NINGBO SUNSOUL UTgbọala ngwa mma CO., LTD
Oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi
Oge: 2020-08-27 Hits: 32
Mgbe oge mgbụsị akwụkwọ ruru, epupụta na-amalite ịcha edo edo wee daa. Ifufe mgbụsị akwụkwọ na-ewetara anyị oyi, ọ na-eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala. "N'ezie ana m ahụ pọmigranet uhie, oroma na-acha odo odo na ube na-atọ ụtọ na ebe a na-ere ahịa. A na-egbute ọka, osikapa, ọka wit na ọka.
Osisi laurel na-enye isi. The senti na-eme ka ọ bụ ụzọ stralght n'ime m imi. Ngwurugwu na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-eguzo n'azụ ahịrị nke ụgbọ elu toro ogologo. Mgbe ụfọdụ, ụbịa mmiri na-ezo nke ukwuu na osisi na okooko osisi na ala. Ọ na-asacha ihe niile dị ọcha. Mgbe anyanwụ na-apụta, ụmụ irighiri mmiri na-enwu gbaa na akwụkwọ odo.
Na oge mgbụsị akwụkwọ, epupụta na-acha odo odo na mkpụrụ osisi chara acha. Ọ bụ oge owuwe ihe ubi. n'oge mgbụsị akwụkwọ, anyị na-aga njem gaa ugwu iji nwee ekele maka akwụkwọ uhie na oke mma, ikuku dị ọhụụ na ọdọ mmiri doro anya.
Lee ihe osise mara mma! Oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi, enweghị mgbu, enweghị uru.
Dị ka anyị niile maara, "enweghị ihe mgbu, enweghị uru" bụ ilu dị mkpa na-emesi ike mkpa ọ dị ịrụsi ọrụ ike. Ọ na-agwa anyị na naanị site n'ịrụsi ọrụ ike ka anyị ga-enweta ihe anyị chọrọ, na n'ụzọ megidere ya, onye umengwụ agaghị enweta ihe ọ chọrọ. Yabụ, mgbe ndị ọzọ mezuru ebumnuche ha ma ị nwetaghị ihe ọ bụla, emela mkpesa banyere akara aka na-ezighi ezi ma adala mba, ma. Cheta: enweghị ihe mgbu, enweghị uru.
Previous: Afọ 70 nke ndị China
Ọzọ: I siri ike karịa ka ị chere